IIKHABHATHI ZASEKHITSHINI ZASEYUROPHU (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGCINA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi zaseKhitshini zaseYurophu (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Iikhabhathi zaseKhitshini zaseYurophu (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiikhabhathi zaseYurophu zekhitshi kubandakanya iintlobo ezidumileyo, ezigqityiweyo kunye nezixhobo.
Okungaphantsi kuninzi Le filosofi yoyilo ichaza ngcono imeko yoyilo lweekhitshi zaseYurophu. Eyona nto bayithandayo ngesibheno sabo esithandekayo kunye nembonakalo entle, iikhitshi zaseYurophu azikho mhle kwaphela kodwa zikwabonisa umtshato ogqibeleleyo woyilo oluncinci olunobuninzi bokusebenza.
Ikhitshi laseYurophu lenzelwe ukulungela iindawo zokuhlala ezinomda eNgilane, eSpain nase-Itali. Iiflethi zaseYurophu kunye neefulethi ngokubanzi zazincinci ngomlinganiso xa kuthelekiswa nomndilili waseMelika, yiyo loo nto isidingo sokwakha ikhitshi enobukhulu obuza kulungiselela imisebenzi yabantu bemihla ngemihla. Ngeyona njongo yokugxila ekusebenzeni nasekusebenzeni kakuhle endaweni yokuhombisa, iikhitshi zaseYurophu zenziwe njengeendawo ezinamandla ezihlangabezana neemfuno zabasebenzisi- yonke into yandiswa kodwa ubuhle abuzange butshatyalaliswe.
Kuba ukusebenza yayiyeyona nto iphambili kwiikhitshi zesitayile saseYurophu, zonke izinto zesithuba zikhethwe ngononophelo ukuzisa ikhitshi kubukho bayo, kubandakanya nekhabhathi yekhitshi. Abayili beekhitshi zaseYurophu bakwazile ukwenza uhlobo lwekhabhathi yekhitshi esebenzisa uhlobo olukhethekileyo lwendlela yokwakha ikhabhathi, ubuchule bokugqiba kunye nezinto ezizinzileyo.
Apha ngezantsi siphonononga ezinye zezinto eziphambili zoyilo lwesitayile saseYurophu iikhabhathi zasekhitshini ukukunceda uthathe isigqibo sokuba ukusebenza kwabo okuphezulu kunye nomlinganiso we-ultra sleek kulungile na kwikhaya lakho. (Kwiindidi ezininzi zekhabinethi, jonga igalari epheleleyo ye Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini kweli phepha)
Ngokubanzi, iikhabhathi zaseYurophu zekhitshi zichaphazeleka kakhulu kwisitayile saseMelika, kodwa sibekelwe uhlobo lwaso lwe-ultra sleek. Iikhabhathi zasekhitshini zekhitshi zaseYurophu zichazwa yimbonakalo yanamhlanje kunye nembonakalo yoshishino ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye iindlela zekhabinethi yekhitshi. Ebonakaliswe ngokuba yinto ephucukileyo kunye nesitayile esigqibeleleyo, iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zaziwa kakuhle ngemigangatho yazo enamafutha, uyilo oluhlengahlengisiweyo, ukuhonjiswa okucekeceke kunye nobuhle obungenamthungo. Ukongeza kwixabiso layo lobugcisa, iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ziyaziwa ngokubonelela ngengxabano encinci kunye nokukhululeka okuphezulu malunga nokusetyenziswa. Nazi ezinye zeempawu eziphambili zeekhabhathi zekhitshi zaseYurophu.
Iimpawu zoYilo lweKhabinethi yeeKhitshi zaseYurophu
Kugqitywa ngeeKhabinethi zaseKhitshini zaseYurophu
Iikhabhathi zePaint Paint
Uhlobo lweKhabhathi yaseKitchini yeKhitshi yanamhlanje
Iminyango yeKhabinethi yaseKhitshini yaseYurophu
Iikhabhathi zaseKhitshini ezingenasiphelo zaseYurophu
I-European Kitchen yeKhabinethi yezixhobo zekhompyutha (Iindidi kunye nokuGqiba)
Imbonakalo entle - Uyilo lweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zine-ultra sleek, isitayile kwaye zinembonakalo ephezulu. Olu hlobo lwekhabhathi yoyilo lwekhitshi lufana ne-aesthetics encinci yesitayile sangoku ngendlela yokuba iifom zicocekile, zilungelelaniswe kwaye zichazwe kakuhle.
Imiphezulu egudileyo kunye noburhabaxa - Uyilo lweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zihlala zibonisa ukuguda, indawo ethe tyaba edla ngokubonakaliswa ngulusu olukhazimlisiweyo. Oku kudla ngokubonakaliswa kukusetyenziswa kweepeyinti eziphezulu zegloss okanye i-laminates, izixhobo zekhabhathi zentsimbi, iiplastiki, ivinyl kunye neglasi. Ngenxa yoko, indawo ethe tyaba kwaye egudileyo yeendlela zaseYurophu iikhabhathi zekhitshi zingenza iindawo okanye iikhitshi ezincinci zive ngathi zi-roomier.
Ukungabikho komhombiso - Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zangqinelana nobuhle be-aesthetics yoyilo kwaye zibeka ugxininiso ekusebenzeni kunokuhombisa. Yingaphandle kwezihombiso ezigqithileyo kunyezihlala zibonisa imiphezulu ethe tyaba kwaye kungekho ndlela ichazayoezinje ngemihombiso yokuhombisa, ukubumba isithsaba, imikrolo kunye neepaneli eziphakanyisiweyo.Kwaye njengangoku kuyilo lwekhabhinethi lwangoku kunye nolwexesha langoku, isitayile sakhe sekhitshi ekhitshini sihlala sineendlela ezilula zecango lekhabethe njengomnyango wesitayile somnyango kunye nomnyango wepaneli ethe tyaba.
Imigca ethe tye - Uyilo lweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu ezijolise kwiifom ezinemigca, imigca ye-angular kunye nemiphetho ethe nkqo. Ngokungafaniyo noyilo lwesiko oluhlala lubonisa iiarches, imigca enobubele kunye neefom ezinesitayile esikhulu, iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zineemilo zejiyometri ezibalaseleyo njengonxande.
Imibala engathath'icala kunye neBold - Imibala yeekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zohlobo lwe-European zithatha ukungathathi hlangothi njengemhlophe, ngwevu, taupe kunye nomnyama ukuya kumbala ongqindilili njengobomvu obuqaqambileyo, imifuno yekalika neeorenji.
Ukugquma ngokupheleleyo kunye noyilo olungenasiphelo - Ulwakhiwo olungenasiphelo okanye uyilo olupheleleyo lokugquma lufana nekhabhathi yaseYurophu ekhitshini. Ayisiqinisekisi kuphela ukujongeka komthungo kunye nokubonakala okuthe kratya kwikhabhathi yekhitshi kodwa ikwonyusa ukusebenza ngokubonelela ngendawo yokugcina ephezulu kunye nokunceda ekusebenziseni lula.
Elula, izixhobo ezingaphantsi - Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zisebenzisa i-sleek, encinci kunye nekhitshi yekhitshi engaphantsi. IKhabinethi iyatsala, iphathe kunye namaqhina zihlala zineendlela ezilula, ezifihlakeleyo ezincedisa ukubonakala kokuyilwa kwekhabhinethi yaseYurophu. Ngokwesiqhelo, isitayile sekhabhathi yekhitshi yaseYurophu sinombala wesilivere kwaye sihlala sipolishiwe, sibrashiwe okanye sigqibelwe i-satin. Ezi zixhobo zekhabhathi yekhitshi ziyilelwe ukonyusa ukusebenza ngokukuko kunye noncedo lwentuthuzelo kunye nokulula.
Iihenjisi ezifihliweyo - Ngenxa yesitayile sokwakha esingenasiseko sekhabhathi zekhitshi zaseYurophu, iihenjisi ezifihliweyo zihlala zisetyenziswa njengesixhobo seengcango zekhabinethi yasekhitshini.
Ukwanda kokusebenza kunye nokusebenziseka lula - Yenzelwe ukubeka phambili iimfuno zomsebenzisi kwaye ngokubaluleka kokusebenza, iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zizisa ukusebenza okuphezulu ngokusetyenziswa kweenkqubo zokugcina ezifanelekileyo ezandisa amandla kunye nombutho. Akukho zimbombo zekhabinethi zekhitshi ezingafikelelekiyo kwaye akukho ngxaki ekuvuleni iingcango zekhabhathi. Uyilo lwayo lukwabandakanya iibhasikiti zocingo kunye nezinye iiyunithi ezidibeneyo ezinciphisa ukutyekela kweukumba ujikeleze ukufumana into oyifunayo.
Izinto zokwenziwa - Endaweni yokubonisa izinto zesintu ezinje ngomthi oqinileyo kugqityiwe kwendalo, iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zihlala zisebenzisa izinto zokwenziwa ezinje ngefibreboard yangaphakathi (i-MDF), ibhodi yamasuntswana, iplywood okanye iinkuni ezenziwe ngobunjineli bekhabhathi okanye ibhokisi. Ngelixa ukugqitywa kuyinto ekhethekileyo kwaye kusetyenziswa izinto ezenziwe ngabantu njengama-laminates, iipeyinti eziphezulu, iiplastiki, iglasi kunye ne-polyurethane.
Izinto ezisetyenziselwa iiKhabhathi zaseKhitshini zaseKhitshini
Uninzi lwezixhobo kwiikhabhathi zasekhitshini zekhitshi zaseYurophu zenziwe ngokuchaseneyo nezitayile zesiko ezibonisa ngokwendalo, izihlahla ezilukhuni eziqinileyo. Ezi zinto zinjengeenkuni ezenziwe ngobunjineli, isinyithi, ikhonkrithi kunye neglasi zicutshungulwa kakhulu ukubanika inkangeleko ebengezelayo nengagudisiyo.
Xa kuziwa kwikhabhathi yesidumbu okanye ibhokisi, izinto eziphambili ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zenziwe ngomthi wobunjineli. Oku kubandakanya iplywood, i-fiberboard ephakathi okanye i-MDF kunye neebhodi zamasuntswana. Ngokwesiqhelo ezi zinto zisebenza njenge-substrate kwenye into yokugqiba.
Kananjalo awufumani mbala wokhuni okanye ivanishi yokugqibezela uyilo lwekhitshi yaseYurophu, kodwa endaweni yoko ezinye iindlela ezinje ngee laminates zisetyenziselwa ukulinganisa ukubonakala kweepateni zokutya okuziinkozo. Ukugqitywa kwe-gloss ephezulu lolunye unyango oludumileyo lweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu kwaye oku kufezekiswa ngokusetyenziswa kweepeyinti ezikhethekileyo ezinjenge-polyurethane, i-acrylic. Ezinye izinto zokugqibezela iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ziquka ukufakwa kweglasi enqabileyo, i-linoleum, i-lacquer, i-thermofoil, ipeyinti, i-polyester okanye i-acrylic.
Ezinye izinto zokwenziwa ezisetyenziswa njengesihombiso esongezelelekileyo kwiikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zentsimbi, iiplastiki, ivinyl kunye nekhonkrithi. Izinyithi ezinjengezinyithi ezingenanto, i-chrome kunye nealuminium zisetyenziswa kakhulu xa kusenziwa izixhobo zekhabhathi yekhitshi kunye nezixhobo zombane. Izinto zokubuyela umva ngokwendalo zibandakanya iithayile ezicacileyo, iglasi yengubo, ngelixa ii-countertops zihlala zisebenzisa umxube wokukhetha izinto ezinje ngelitye lendalo njengegranite kunye nezinto ezenziwe ngumntu ezifana ne-quartz.
Kuba izinto ezenziwe ngabantu zinotyekelo lokwenza ukuba ikhabhathi izive icace gca, ukugqitywa kwendalo ngamanye amaxesha kuqeshwe ukubandakanya into yokulinganisa kwindawo. Izinto zokwenziwa kweenkuni kunye namatye endalo anceda ukubuyisa ubushushu kunye nokuqina ekhitshini.
Iikhabhathi zasekhitshini zekhitshi zaseYurophu azaziwa nje kuphela ngenkangeleko yazo emnandi kodwa nangokutyikitywa kokutyibilika okuphezulu. Ukugqitywa kokuqaqamba okufana nekhabhathi zekhitshi zangoku kunye nekhitshi yesitayile saseYurophu kuyafana nokugqitywa kweemoto.Olu hlobo lokugqiba lwenza ukukhanya okugudileyo, okubonakalisa kakhulu, isipili esifana nomphezulu wekhabhathi yekhitshi.
Ngokweyilo, ukuqaqamba okuphezulu kwesitayile saseYurophu iikhabhathi zasekhitshini kunika ukubukeka okuhle kwesitayile kunye nexesha langoku. Inokunika iikhitshi ezincinci ziqaqambe, zibanzi ngakumbi kwaye zicoceke. Ngaphandle kokunyuka kwexabiso lobuhle, ukugqitywa kokuqaqamba kwegalelo kuphakamisa igalelo lezinto ezibonakalayo ngokubhekisele kuzinzo kunye nobomi bekhabhathi yekhitshi. Kuba ihlala ibandakanya ukusetyenziswa kweepeyinti ezininzi okanye izinto zokugqibezela, isiphumo sokugqitywa kokuqaqamba okuphezulu kukonyusa ukunganyikimisi, ukufuma kunye neearhente zemichiza. Oku kukwaqinisekisa ukuba umbala wekhabhathi zasekhitshini awunxibi ngokulula xa kuthelekiswa nomnyango wekhabhathi opeyintwe rhoqo. Ikwanceda ekwakheni ikhitshi lococeko njengoko umphezulu ogudileyo kakhulu ungazukukhuthaza nayiphi na intsholongwane okanye ukukhula kwentsholongwane.
Ngenxa yenkqubo enzima yokuchitha ixesha kunye nokuchitha ixesha ebandakanyekayo ekwenziweni kwesitayile saseYurophu iikhabhathi zekhitshi eziphezulu zangoku, zinokufumana ixabiso kwaye zingabiza ixabiso elifanayo nekhabhathi epeyintiweyo. Kodwa ngenxa yokujongwa kwabo kukugqibela, ukubhenela kubunewunewu kunye nokuqina okuzinzileyo, Uhlobo lwaseYurophu lwakutshanje lwekhabhathi ekhitshinizithathwa njengotyalo mali olufanelekileyo lobomi obunokongeza ixabiso kwikhaya lakho.
Kukho iingxaki ekuphakameni okuphezulu okugqityiweyo kwiikhabhathi nangona. Inkqubo yokugqibezela isimbo saseYurophu iikhabhathi zekhitshi zala maxesha ziqhele ukwenziwa kwindawo yokuvelisa okanye kwivenkile ekhethekileyo, oko kuthetha ukuba ukuchukumisa kunye nokulungisa kunokufuna ukushenxisa wonke umnyango wekhabhathi emva koko uwuthumele evenkileni. Enye into engalunganga kukuba ukunyatheliswa kweminwe, ii-watermark kunye nokungcola kuyabonakala kwiikhabhathi eziphezulu zekhitshi, yiyo loo nto zinokufuna ukosulwa okungaphezulu nokucoca rhoqo.
Endaweni yokuvumela ubuhle bendalo beenkuni zokwenyani ukuba bubonakale, iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zihlala zisebenzisa ezinye izinto zala maxesha ukwenza uyilo olungenamthungo kunye nokujonga okuthe kratya. Njengoko sele kukhankanyiwe, ukugqitywa kwezinto zihlala zihlanganisiwe kwaye zilungiswa kakhulu.
Ukugqitywa kokuqaqamba kukubonakala kotyikityo lwekhabhathi zekhitshi zaseYurophu kwaye oku kubonakalisa kakhulu kufezekiswa ngokusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo zokugqiba ezifuna inkqubo enzima yabasebenzi. Ezinye iindlela zokuvelisa isicwebe esiphakamileyo saseYurophu iikhabhathi zasekhitshini ziyaqengqeleka okanye zihlanjwe ngeebhatyi. yepeyinti ebengezelayo, ukutshiza ngokufaka isiguquli, ukusetyenziswa kwethambo lethambo, ukuthambisa i-lacquering kunye ne-laminating. Amaxesha ngamaxesha, ifuna izinto ezininzi zokugqiba, zilandelwe kukugcwala okulandela inkqubo efanayo ebandakanya ukwenziwa kweemoto.
Inkuni ikwayindawo ethandwayo, kodwa endaweni yokusebenzisa iinkuni zokwenene kwimibala yazo yendalo, etyebileyo, izinto zekhabinethi zihlala ziphathwa ngokugqiba ukubamba kunye nokulinganisa ubuhle bokhuni bokwenyani, njenge-veneers okanye i-laminates.
Kukho izinto ezahlukeneyo ezinokusetyenziselwa ukufezekisa ukukhanya okuphezulu, okuqaqambileyo kwiikhabhathi zekhitshi zaseYurophu ezizezi iipeyinti zeduco, i-polyurethane, i-acrylic, i-lacquer, i-foil kunye ne-laminates. uyilo:
Oku ikhitshi elimhlophe namhlophe Iimpawu zeekhabhathi ze-acrylic.Ukugqitywa kwe-acrylic luhlobo olufana ne-lacquer enika iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu indawo ephezulu yokuhomba, isipili esifana nokubonakala nokubonakala ngokugqibeleleyo. I-acrylic luhlobo olungeyongozeli lwepeyinti ikakhulu olwenziwe nge-acrylic acid, kwaye ngokwekhitshi lokugqiba iikhabhathi, i-acrylic iza ngeendlela ezimbini ngokubanzi ezizezi: iingcango eziqinileyo ze-acrylic kunye neminyango ejongene ne-acrylic.
Iingcango eziqinileyo ze-acrylic zigqityiwe nge-acrylic ngapha nangapha, yiyo loo nto zinombala ngakumbi nangokubonakala kokutyeba, kodwa zibiza kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, iingcango ezijamelene ne-Acrylic, zizinto ezingabizi kakhulu kuba endaweni yokuba yenziwe nge-acrylic yonke indlela, iingcango zigqunywe luluhlu lwezixhobo. Inkqubo yokusebenzisa ukugqitywa kwe-acrylic kwiminyango yekhabhinethi yasekhitshini yinkqubo enzima yokusebenza ebandakanya ukunamathisela iphepha le-acrylic kwi-substrate efana ne-fiberboard ephakathi okanye i-MDF, kwaye uyigubungele ngogcino lokukhusela nokutywina imiphetho yayo.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ezinyangwa nge-acrylic gloss ephezulu azizisi kuphela ukunyuka kwexabiso lobuhle kodwa zikwafaka igalelo lezinto ezininzi. Ngaphandle kokudala umoya omema kakhulu, iikhabhathi zekhitshi eziphezulu ze-acrylic zinokuthatha ukunxiba kunye nokukrazula ekusebenziseni kwemihla ngemihla ngenxa yokuqina kwayo. Ukongeza, ukugqitywa okunemigangatho emininzi esetyenziselwa ukugqitywa kwe-acrylic kudala umhlaba onganyangekiyo ongcono kunayo nayiphi na enye into. Ukongeza, ukufuma, ukukhanya kwe-UV kunye nokukrwela okunganyangekiyo. Ukugcinwa kukona kona kukukhathaza ngenxa yokuba ukucoca kulula kwaye kufuna isepha namanzi kuphela. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, iikhabhathi zekhitshi ezinobukhazikhazi obuphezulu zinokugcina isibuko sayo njengokubonakala, umbala kunye nokuqaqamba iminyaka ngaphandle kokuphela.
Nangona kunjalo kusekho uninzi lwezithintelo kolu hlobo lokugqitywa kwekhabinethi yaseYurophu ekhitshini. Nangona ukucoca kulula, imizila yeminwe, i-watermark, ukungcola kunye namabala kuyabonakala kwindawo ephezulu ebengezelayo, kungoko ulondolozo rhoqo luyimfuneko. Ixabiso layo likwaqwalaselwa kakhulu kuba kuyabiza kakhulu xa kuthelekiswa ne-laminates okanye ukugqitywa kweembrane.
Ngokwemeko yoyilo kunye nokuguquguquka, i-acrylic iyahambelana nezinye izinto ezigqityiweyo kuba ikwafumaneka kuluhlu olubanzi lokhetho lombala oluvumela ulwenziwo.
I-Thermofoil, i-foil okanye i-foiling yenye yezinto ezigqityiweyo ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu kunye neenkqubo zekhabhathi zasekhitshini. Ngokuqhelekileyo yaziwa ngokuba yi-thermofoils, i-foil luhlobo lwezinto zokwenziwa ikakhulu ezenziwa ngeplastikhi kunye ne-vinyl eguqukayo. I-Thermofoils ziqhotyoshelwe ngaphezulu kwezinto zekhabinethi ezinje ngefibreboard yobunzima obuphakathi okanye iinkuni zobunjineli ngokufudumeza. Oku kunika iikhabhathi zasekhitshini indawo ehlala ixesha elide kakhulu kwaye inxibe ngokunganyamezelekiyo.
Zininzi izibonelelo zokusebenzisa i-thermofoils njengokugqibezela iikhabhathi zasekhitshini, kodwa esona sizathu siphambili sokuba kutheni abanini khaya betsala kuyo kungenxa yokuba bafuna ulondolozo olusezantsi. Ngokungafaniyo nezinye izinto zokugqibezela, i-thermofoil yomelele ngokwaneleyo ukuba ingazimela kwaye ayifuni simbo sokhuseleko. Ukongeza, i-thermofoils ikwanazo neempawu zokumelana nobumanzi ezibavumela ukuba banyamezele ukuvezwa kukufuma kunye notshintsho lobushushu.
Uninzi lwabenzi bekhabhinethi yekhitshi basebenzisa iifilitha eziphezulu ze-European style kitchenryry. Iifilili eziphezulu zokuhombisa zizinto ezinika imbonakalo kunye nesipili njengokugqiba. Iyafumaneka kuluhlu olubanzi lombala kunye neepatheni ezinje ngemibala eqinileyo okanye umthi njengokugqitywa okuvumela ukuba kwenziwe ngokwezifiso kunye nokwenza ubuwena. Umbala we-thermofoils, ngokubanzi, uvela kwizinto ezingathathi hlangothi ezifana nomhlophe ukuya kwii-hues ezinamandla njengobomvu, ngelixa iifomathi zingaba zi-matte okanye zi-glossy. Iifilili eziphezulu zegloss zisetyenziselwa ukusetyenziswa kweengcango zesitayile kunye noyilo lwekhabhathi ekhitshini kodwa ikwanokuguquguquka ngokwaneleyo ukuba ibunjwe kwiifom ezigoso.
Ngokubanzi, iileyibhile eziphezulu ezibengezelayo zivelisa ubungqingqwa obugudileyo kunye nomhlaba ocekeceke ngelixa uzisa umlingiswa wangoku kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu. Iziphumo zizonke zekhabhathi zaseYurophu zekhitshini zasekhitshini nazo ziyafana kwaye nangenxa yokuba umbala usetyenziswa kubuso bekhabhathi . Iifilili eziphezulu zegloss zisetyenziselwa ukusetyenziswa kweengcango zesitayile kunye noyilo lwekhabhathi ekhitshini kodwa ikwanokuguquguquka ngokwaneleyo ukuba ibunjwe kwiifom ezigoso.
Ukusetyenziswa kwe-laminates yindlela efanelekileyo yokufumana ukubonwa okuphezulu kwekhabhinethi kwikhitshi. Oku kuxhaphake kakhulu kusetyenziswa isitayile saseYurophu iikhabhathi zekhitshi ngenxa yokufumaneka kwayo kunye nokukhetha imibala eyahlukeneyo evumela ukwenziwa ngokwezifiso okuphezulu.
IiLaminates zezona zinto zokugqibela zigqibeleleyo kwaye isetyenziswa ngakumbi kwizimbo zangoku kunokuba kuyilo lwekhabhinethi yemveli. Abanye badume ngokuyazi njengeFomica - uphawu olwaziwayo lwee laminates. Le nto ibhityileyo, ilula kwaye yayijongwa njengobuthathaka kwaye ingazinzanga kodwa iindlela ezintsha zokuvelisa zanika ii-laminates umgangatho ophuculweyo kunye nomlingiswa ongcono, owomeleleyo nozinzileyo. Esona sizathu siphambili soku kuzinza kukomelela kwezinto ezizodwa. IiLaminates zicutshungulwa kakhulu kwaye zenziwe ngamanqanaba aliqela abekwe ndawonye. Ezi zahlulo zine zibandakanya umaleko ophezulu osisikhuselo se-melamine resin, umaleko wesibini okanye umaleko wokuhombisa oqulathe uyilo, ipateni kunye nokuthungwa kwelaminathi, umaleko osisiseko oyiphepha leKraft eliqinisiweyo, okokugqibela, ukunxiba umaleko, oludibaniso lwee-oxide ze-aluminium, i-melamine resins kunye nephepha.
Kwiikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zohlobo lwasekhitshini, ii-laminates zihlala zisetyenziswa ngaphezulu kwezinto ze-substrate zekhabethe ezihlala ziyiplywood, i-MDF okanye ibhodi yamasuntswana. Ubushushu, uxinzelelo kunye nezinto zokuncamathelisa zisetyenziselwa ukunceda ukulungisa izinto endaweni yazo, ukuqinisekisa ukuba ayicimi lula okanye icekeceke. Kwiinkqubo ezininzi zekhabinethi zemodyuli kwaye zenziwe iikhabhathi zekhitshi eziphezulu, iiLaminates zoxinzelelo oluphezulu okanye i-HPL isetyenziswa kakhulu kuba ihlala ixesha elide, inxibe ixesha elide kwaye iyamelana nomonakalo xa kuthelekiswa neelaminathi eziqhelekileyo. Xa kuziwa kumandla, i-HPL ithelekiswa neetafile ezomeleleyo.
Iilaminates ziyafumaneka ngokubanzi kwimithi efana nokugqitywa kodwa zithengiswa ngokulula kwiiyantlukwano eziphezulu. Uluhlu lwayo olubanzi lwemibala luvela kokungathathi hlangothi njengemhlophe, mnyama, ngwevu, taupe ukuya kumbala ongqindilili njengombala odlamkileyo, imifuno yekalika okanye iiorenji ezifanelekileyo imibala yemibala kunye nobuhle bekhitshi yaseYurophu. Ukugqitywa kwelaminethi kusebenza kakuhle kwisitayile sekhitshi yaseYurophu kuba kudala umphezulu ngokugudileyo noyilo olungenamthungo. Imibala ikwayinyani ngakumbi kuba isetyenziswa kumaphepha kunokuba ibrashi. Ngokubanzi, iziphumo zokuhombisa okuphezulu okuqaqambileyo kwesimbo sekhabhathi zekhitshi zaseYurophu yimbonakalo engenasiphako kunye nesitayile esinexabiso eliphantsi.
Ukongeza ekusebenzeni ngokungafaniyo kuyilo, ii-laminates zibonelela ngezibonelelo ezithile ezinje ngokuchasene nokubuna okanye ukujija kunye nokukwazi ukumelana nokusetyenziswa okunzima.
I-Lacquering yindlela yokugqibezela yesiko ebonelela ngokugqitywa okuphezulu kakhulu kwiglasi kwifenitshala, iiseramikhi, ubumba kunye nekhabhathi yekhitshi. Olu gqibelo lukwayinto esetyenziswayo ukufezekisa ukubonakala okubonakalayo kweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu.
I-Lacquer luhlobo lwezinto zokugqiba ezikhuselayo ezenziwe nge-shellac kunye nobubanzi ukusuka kwibala elinemibala ecacileyo. Kodwa endaweni yokubonelela ngombala kwiikhabhathi zasekhitshini, i-lacquer isebenza njengokukhusela okanye ingubo ephezulu yegloss. Izinto zekhabhinethi zekhitshi zisafuna ukupeyintwa okanye ukunyangwa nge-Ungasebenzisa i-lacquering ukuba ufuna ukunamathela kwimbonakalo yoqobo yeekhabhathi zakho zasekhitshini kodwa ufuna ukuyinika is sheen. Xa i-lacquer yoma, umphumo uba yindawo enzima kakhulu kwaye ihlala ixesha elide evumela iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ukuba zihlale iminyaka ngaphandle kokonakala okanye ukophuka.
I-PVC isongelwe, i-vinyl isongelwe kunye ne-PET eqingqiweyo yomnyango weglasi ekhitshini- Phakathi kwazo zonke izinto ezigqityiweyo zokuhombisa ngesimbo esiphakamileyo iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu, iplastiki, ivinyl okanye iingcango ezisongelwe nge-PVC zithathwa njengemigangatho esezantsi okanye esemgangathweni yeengcango zekhitshi ezikhoyo kwimarike. Nangona nganye yezi zinto inenzuzo yayo, kusaqwalaselwa ukuba yomelele kancinci xa kuthelekiswa ne-acrylic, i-lacquer kunye ne-laminates.
Ukugqitywa kwekhabinethi yasekhitshini kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu kufezekiswa ngokusongela isiseko se-MDF ngocingo olucekeceke lweplastikhi enje ngevinyl okanye iPV, exutywe ne-resin, i-foil okanye i-PET (i-polyethylene terephthalate). Xa kuthelekiswa ne-acrylic, i-polyurethane kunye nokugqitywa kwe-lacquered, le minyango yekhabhinethi yasekhitshini inembonakalo engaphantsi. Olona phawu luphambili lweengcango zekhabinethi ezisongekileyo kukuba umphezulu wayo ngamanye amaxesha unokuthambeka okungafaniyo.
Nangona kunjalo, ayizizo zonke i-PVC, i-vinyl, i-PET okanye i-foil esongelwe iingcango eziphakamileyo ezisemgangathweni. Iimodyuli ezikhethekileyo zabanikezeli bekhabhathi yekhitshi kunye neendawo zokubonisa zasekhitshini zisasaza iingcango ze-MDF eziphathwa ngezinto zokugqibezela.
Ukugqitywa kwe-duco luhlobo lwepeyinti yokugqiba enika ukubonakala okugudileyo, okucwebezelayo kwikhabhathi yekhitshi, ebenza ukuba balungele ubuhle obuhle beendlela zaseYurophu zekhitshi. Ngokungafaniyo ne-acrylic evelisa isibuko esifana nokufana, ukugqitywa kwepeyinti yeduco kunegalelo kwinqanaba eliphezulu le-sheen.
Olu hlobo lokugqiba lufihla ukutyeba kwendalo kwesiqwengana somthi ngepeyinti ye-opaque. Amanqanaba e-sheen yokuphelisa ipeyinti ye-duco ukusuka kwi-flat, satin, gloss semi to gloss finish. Inkqubo yesicelo sayo ibandakanya ukutshiza ipeyinti kwinto leyo kusetyenziswa isiguquli. Ezinye iintlobo zeprint zepeyinti ezisetyenziselwa ukugqitywa kwe-duco yipeyinti ye-enamel ye-acrylic, ipeyinti esekwe emanzini okanye iipeyinti zealkyd
Ukugqitywa kwepeyinti yeduco kuqheleke kakhulu ukusetyenziselwa ukuvelisa ifanitshala, nangona kunjalo isebenza kakuhle ekudaleni umphezulu wekhitshi ekhitshini. Obu buchule bokugqibezela lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukunamathela kwipeyinti kodwa ungathanda ukulingisa ukubonakala kwekhabhinethi ekhazimlayo ekhitshini. Inika ixabiso lendlela efanelekileyo yokuhlaziya ukubonakala kweekhabhathi esele zenziwe ngomthi kwaye uziguqulele kuyilo lwala maxesha. Imveliso iyonke yokugqitywa kwepeyinti yeduco yindawo ethe tyaba nomphezulu ococekileyo onika ukuziva okunexabiso kunye nokunethezeka emakhitshini. .
IiVeneers zisetyenziswa ukuba ufuna ukuzisa into yendalo kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu. Njengama-laminates, ii-veneers zizinto ezingasindi kakhulu ezizizicwecwana ezicekethekileyo ezisetyenziswa phezu kwezinto ze-substrate ukubanika imbonakalo yomthi oqinileyo. Izinto ezivelisa imveliso zibandakanya ukusika isiqwenga somthi ngeeringi zokukhula - obu buchule buthatha ipateni yokugaya kunye nomthi. Ubungakanani obuqhelekileyo be-veneers bungaphantsi kwe-3 millimeter kwaye buhlala buthengiswa kwimarike njengeentlobo zemithi esemgangathweni enje ngecherry, oki, maple, njl.
I-Veneer ikwafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo ezizezi, i-veneers ekrwada okanye yokwenyani, iphepha elixhaswe, i-phenolic ixhaswe, ibekiwe, iphinda yenziwa kwakhona okanye iinkuni ngomthi. Uhlobo ngalunye lunezinto zalo ezilungileyo nezingalunganga, kodwa ngokubanzi, zonke izinto ezenziwe ngomthi ziyaphakama ukuze zahlukane okanye zisonge ngokungafaniyo nomthi oqinileyo. Ukongeza, iglu okanye isincamathelisi esisetyenziselwa ukudibanisa izilayi ezicekethekileyo zomthi ngokudibeneyo zomeleza ukomelela kwaso, siyenze ibe yinto ehlala ihleli kwaye ihlala ixesha elide.
I-Veneers isetyenziselwa kakhulu iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ezijolise ekungeniseni umoya oshushu, wokwamkela esithubeni. Njengoko sele kukhankanyiwe, ukusetyenziswa kwezinto zokwenziwa okuninzi ngamanye amaxesha kunokwenza ukuba ikhitshi lizive lingenabudla kwaye indlela elungileyo yokuyiphelisa kukuzisa umnqweno wokugqitywa kweenkuni zendalo kunye nombala. Izinto ezenziwe ngeplanga ngamanye amaxesha zithathwa njengezingcono kunezinye izinto ezifana nezinto kuba zibuthabatha ngokupheleleyo ubuhle bokwenyani bomthi kodwa zinciphise iingxaki ezinokubakho. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nezinye izinto zokugqiba, i-veneer iyabiza kakhulu.
Endaweni yokuba isetyenziselwe ukufezekisa ukubengezela okuphezulu, ii-veneers zisetyenziselwa ukhuni lwekhabhathi ekhitshini. Iziphumo zizonke zijongeka kakuhle kuba iipateni zokuhluza ziyahambelana ngakumbi. I-Veneers isebenza kakuhle kwimimandla ethe tyaba kunye nakwindlela yokubamba iingcango zekhabinethi yekhitshi. Imibala eqhelekileyo yokuthambisa iinkuni ezisetyenziselwa uyilo lwekhitshi yaseYurophu yekhitshi yoyilo iphakathi ukuya kumbala omnyama. Kwaye njengangoku kuyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje, ii-veneers ezineepateni zokuthoba ezithe tye nazo ziyathandwa.
Iimpawu ngokubanzi kunye neempawu zobuhle zesitayile sangoku kunye nekhabhathi yaseYurophu yekhitshi yasekhitshini ayikho kude enye kwenye, enyanisweni, uninzi lweempawu zabo eziphambili ziyadibana- indawo egudileyo, umhombiso omncinci, izixhobo zekhompyutha kunye nokusetyenziswa kwezinto zokwenziwa. Nangona kunjalo, uphawu olongezelelekileyo longezwa ngokudibanisa ukuphefumlelwa kwendabuko kwimo yokuhlala enokwenyani kunye neyokwenyani yeekhitshi zaseYurophu zangoku. Ukongeza kwimfudumalo kunye nokucoceka kwendalo kwimeko ephucukileyo kunye nokuseta kwamhlanje kweekhitshi zaseYurophu, iinkuni zihlala zaziswa njengenxalenye yombala wemibala.
Ngokwembonakalo, iikhabhathi zasekhitshini zangoku zaseYurophu zijolise ngakumbi kumthi ofana nokubonakala xa kuthelekiswa nemibala eqinileyo eqaqambileyo ehlala inxulunyaniswa nokuphefumlelwa kwesitayile sanamhlanje. IiLaminates ezinepateni yokugaya ethe tyaba ziyintandokazi yeklasikhi yeekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zangoku. Ngenye indlela, kucacile, imibala eqinileyo engathathi hlangothi iyasetyenziswa endaweni ye-hues ekhanyayo enesibindi kwaye ezi ndlela zibandakanya abamhlophe, abamhlophe, abemhlophe, itayipi kunye nemibala emdaka.
Ngokungafaniyo noyilo lwesiko oluhlala luneenkcukacha zokuhombisa ezinjengokukrola, ukubumba, ukusika okanye iipaneli eziphakanyisiweyo, ukubonakala ngokubanzi kweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zibonakaliswa yithafa, indawo ethe tyaba engenalo naluphi na uhlobo lokuhombisa.
Uhlobo oluqhelekileyo lwesitayile somnyango wekhitshi lasekhitshini esisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu Iingcango zesitayile seSlab. Umnyango wekhabhinethi yesitayile lolona hlobo lulula nolona lusisiseko lomnyango wekhitshi ekhitshini olukhoyo kwimarike. Iingcango zesitayile seSlab, njengoko igama lazo lisitsho, zibonakaliswa ngesiqwenga esinye, esiqinileyo, esingafakwanga silo okanye isileyi okanye umthi osicaba. Uyilo lwayo luyacaca ngokucacileyo-ngaphandle kokuhonjiswa okubonakalayo, ukubumba okuhombisayo, i-edgings, i-trim, iifreyimu okanye iipaneli
Iingcango zesitayile seSlab ziyathandwa kuyilo lwekhabhinethi lwangoku kunye nolwanamhlanje kodwa zithathwa njengotyikityo lokujonga iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu. Umnyango wesitayile se-slab waziwa ngokulula nangokungajongi ndawo ngaphandle kwawo okunika iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ukubukeka okuthe tye, okucekethekileyo kunye nokuncinci.
Iingcango zesitayile seSlab zikwasebenza ngokugqibeleleyo xa kugqitywe i-gloss kuba ibonelela ngendawo ethe tyaba ukubonisa isipili esifana nokugqitywa- akukho zinto zibunjiweyo kunye nezinto ezinokuphazamisa ukugqitywa okukhethekileyo. Ukongeza, iindlela ezininzi zaseYurophu zekhabinethi ezigqityiweyo nazo zikulungele ngakumbi iingcango zesitayile se-slab njengoko umphezulu ugudile kwaye awuzukunyanzela umbandela kwimida yawo, umzekelo i-laminates, veneers okanye i-acrylic.
Olunye uphawu oluphambili oluseta iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ngaphandle kwezinye izitayile zekhabinethi yoyilo kuyilo lwazo olungenachaphaza kunye nolwakhiwo. Uhlobo olungenasiphelo lolwakhiwo lwekhabhathi yekhitshi luvumela ukujonga ngaphandle komthungo kwaye luqinisekisa uyilo lwe-ultra sleek yoyilo kunye notshintsho olugudileyo phakathi kwekhabhathi yekhitshi.
Ukwakhiwa kwekhabinethi yekhitshi esemgangathweni kusetyenziswa izitayile okanye amalungu athe nkqo kwisakhelo sobuso kunye neerili okanye amalungu athe tyaba kwisakhelo sobuso. Izitayile kunye neerayile zenza icandelo langaphambili lekhabhinethi apho umnyango uncanyathiselwe khona. Iipaneli zecala lekhabhinethi, ngakolunye uhlangothi, zi-inset kwaye ziqhotyoshelwe kwisitayile kunye nomzila wesitimela. Le ndlela yesiko yokwakha iikhabhathi zasekhitshini yaziwa njengokwakhiwa kwesakhelo sobuso.
Kodwa xa kufikwa kuhlobo olungenasiphene lolwakhiwo lwekhabhathi yekhitshi, akukho zitshintshi kunye neziporo zisetyenzisiweyo kodwa ziipaneli zecala kuphela. Umnyango wekhabhinethi uqhotyoshelwe ngqo kwiiphaneli ezisecaleni usebenzisa iihenjisi. Kwaye ekubeni olu hlobo lwendlela yokwakha ikhabhathi ayisebenzisi isakhelo sekhabhinethi, endaweni yoko ixhomekeke kwisitya sekhabhathi esityebileyo okanye ekwakheni ibhokisi ukuzinza.
Iikhabhathi zekhitshi ezingenasiseko zisebenzisa iingcango ezigcweleyo ngaphezulu. Iingcango ezigutyungelweyo ezigcweleyo ziingcango zekhabinethi eziqhotyoshelwe ngqo kumacala ebhokisi yekhabethe okanye isidumbu. Olu hlobo lokwakha lwekhabhinethi lukwabandakanya ukusetyenziswa kweehenjisi ezifihliweyo okanye ezifihliweyo. Iingcango ezigqunywe ngaphezulu ziqinisekisa uyilo olugudileyo ngokufihla okanye ngokufihla isakhelo sekhabhathi emva kweengcango zekhabhinethi.
Uyilo lwekhabhathi yaseYurophu olungenasiseko bobabini bobuhle kunye nokusetyenziswa kwendalo kuba ibonelela ngezibonelelo ezithile ezibonakalayo. Okokuqala kukuba ibonelela ngokufikelela okuphezulu kunye nomthamo wokugcina ophezulu. Iikhabhathi zasekhitshini ezingenasiseko zikwabizwa ngokuba ziindawo ezipheleleyo zokufikelela ekhitshini kuba azikho izakhelo zobuso zekhabinethi eziphazamisa ugcino.
Iikhabhathi zekhitshi ezinemizobo zinokubakho ngaphambili xa kufikwa ekubeni zomelele kodwa iikhabhathi zekhitshi ezingenachaphaza zibonelela ngokugcina ngakumbi. Ayinayo i-stiles ethe nkqo okanye izahlulelo ezenza ukuba kube nzima ukugcina izinto okanye ubungakanani obupheleleyo be-dinnerware kunye nezixhobo zasekhitshini. Iibhokisi zeedrowa zikhulu kakhulu njengoko kungekho malungu ekhabhinethi okanye amalungu athatha indawo. Okokugqibela, iikhabhathi zasekhitshini ezingenasiseko zivelisa ukucoceka okucocekileyo. Ikhabhathi yekhabhathi engenachaphaza idibanisa ngakumbi ngaphandle komthungo, iqinisekisa ukutshintsha okuthe tye ngakumbi phakathi kwezinto ezahlukeneyo zesithuba kunye nokukhuthaza uyilo olumanyanisiweyo olugqibeleleyo kubuhle obuhle beekhitshi zaseYurophu.
Ngenjongo yokwenza uyilo lwekhabhathi olusebenzayo nolusebenzayo, iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zibandakanya izisombululo zentsimbi zakutshanje zokwenza ukusetyenziswa kwekhitshi kwemihla ngemihla kube lula ngakumbi, kube lula ngakumbi, kube lula ngakumbi kwaye kube lula. Ikhitshi lekhitshi litsala, izibambo kunye neefonti zazingezizo ii-decors zokugxininisa uyilo lweekhabhathi, kodwa endaweni yoko zancedisa ekuhambeni komsebenzi.
Ngokwendlela yoyilo, iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zinezixhobo ezifanayo nezo zifunyenwe kwiikhabhathi zekhitshi zangoku nezangoku - zilungelelaniswe ngendlela, emacaleni kwaye zingenamhombiso. Ngamanye amaxesha, akukho ziphatho zekhabinethi zibonakaliswe ngaphandle kweengcango zekhabinethi yekhitshi ukwenza ukubukeka okungaphezulu. Uyilo olungaphathwanga luphawu olwahlukileyo kwiikhabhathi zaseYurophu zekhitshi.
Kukho iintlobo ezininzi zehardware yekhabhathi yekhitshi esebenza ngcono kubuhle be-aesthetics yesitayile sekhabhathi yaseYurophu. Apha ngezantsi siphonononga ezinye zezona zoyilo zibalaseleyo kwaye sigqibile kunye neempawu zazo.
Izitayile ezikhethekileyo zehardware yoyilo lwekhabhathi zekhitshi yaseYurophu
Nazi ezinye zeendidi zehardware yekhabethe yentsimbi enceda ukuyila engenamthungo Uyilo lwekhabhinethi yaseYurophu:
Push latch - Into eqhelekileyo kwiikhitshi zesitayile saseYurophu isibhakabhaka esigcweleyo kwiikhabhathi zekhitshi ezinomphezulu ogudileyo. Ukufezekisa oku kujongeka kakuhle, iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zihlala zibonisa uyilo olungenakubanjwa. Ukulungiselela ukubonelela ngokulula ngokwendlela yokusebenza, uyilo lwekhabhathi zekhitshi ezingaphathwanga zisebenzisa ii-latches ezincedisayo ekuvuleni nasekuvalweni kweengcango zekhabinethi.
Iifreyimu zokutyhala zithathwa njengenye yezona zixhobo zisetyenziswa kakuhle kwikhabhathi yekhitshi kwiikhabhathi zekhitshi zangoku nezaseYurophu kuba zibonelela ngobuhle obucocekileyo. I-latch yokutyhala sisiqwengana sesixhobo esimagnethi esifakwe ngaphakathi kwikhabhinethi kunokuba phambi komnyango wekhabhathi yekhitshi. Akukho siqwenga seentsimbi sibonakala kumnyango wekhitshi ekhitshini okanye kwidrowa yobuso, kodwa endaweni yoko esi sixhobo sifakwe ngasemva okanye ngaphakathi kumnyango wekhabhathi.
Ukutyhalwa kwamanqwanqwa kukwabonelela ngezibonelelo ezithile ngokubhekisele ekusebenzeni. Inika indlela elula yokuvula iingcango zekhabinethi ekhitshini njengoko zisebenza zisebenzisa isikhombisi esincinci, ukutyhala okanye ukubamba. Njengeendlela zokuzivala ngokwakho, ii-latches zokutyhala zibonelela ngokushukuma okusondeleyo okanye isiphumo sokuhamba kancinci ekuziseni iingcango zekhabhinethi ekhitshini kwindawo evaliweyo. Ngenxa yoko, ucango lwekhitshi oluvalwe ngokupheleleyo kunye noyilo lwekhabhathi lwekhitshi olungenamthungo luyafezekiswa.
Ithebhu iyatsala - Ukutsala kwithebhu kuqhele ukusetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ezingenazo uyilo olungenakubanjwa. Ukutsala kwithebhu sisiqwengana esincinci sekhabhathi yekhitshi ekhwele ngokuthe ngqo kumda wekhabhathi yekhitshi. Ithatha iprofayile emile eyi-L kwaye ihlala iqhotyoshelwe kwelona candelo liphezulu lomnyango kwiikhabhathi ezisisiseko nakwindawo esezantsi kwiikhabhathi zodonga ngaphezulu. Ukutsalwa kwethebhu akuthandwa kuphela ngokuba ngumhlobiso wokuxhasa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu kodwa ziyasebenza kakhulu kuba zilula ukubambelela kunye nokufikelela.
Ukutsala kwithebhu kufumaneka kuluhlu olubanzi loyilo, ukugqitywa kunye nobukhulu. Isenokuba nencinci okanye ibaleke ubude bomnyango wekhabhathi okanye idrowa, kodwa ngaphandle kokukhetha, ithebhu yokutsala izisa isibheno esihle esicocekileyo ngakumbi ukuba sisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zangoku. Ukutsala kwe-Tab okukhudlwana ngokobungakanani kunembonakalo ebalasele ngakumbi kwaye kunokuzisa ingxelo eqinileyo kwisithuba.
Ityhubhu yentsimbi kunye nesinyithi ithebhu yokutsala ibonelela ngumahluko ocacileyo xa isetyenziselwa umphezulu omenyezelisiweyo weglasi ephezulu yaseYurophu ekhitshini.
Efihliweyo okanye ngohlangothi utsala - Ngokwenkangeleko, ukutsala okufihliweyo kufana kakhulu nokutsala kwithebhu.Ukutsalwa okufihliweyo okanye komphetho ziintlobo zekhompyuter zekhabinethi eziqhotyoshelwe kumda ophezulu womnyango wekhabhathi yekhitshi. Uyilo lokutsalwa okufihliweyo okanye komda kuhlala kuyintsimbi encinci ephuma kwinxalenye egungxayo yekhabinethi yasekhitshini. Xa sele ifakiwe, ukutsalwa okufihliweyo okanye komda kubonakala kungacacanga kuba kufihlwe yikhawuntara yekhitshi ebekwe ngaphezulu kweekhabhathi zekhitshi ezisisiseko.
Ukutsalwa okufihliweyo okanye komphetho kubonelela ngenkangeleko ecocekileyo edityaniswa kakuhle nezinto kunye nobuhle bekhabhathi yasekhitshini yaseYurophu. Zidibene ngokugqibeleleyo kunye noyilo lwekhabhathi encinci ekhitshini kuba zinendlela ecekeceke kunye nembonakalo. Ukongeza kwii-aesthetics zabo ezilula, ezifihliweyo okanye ezinqamlezileyo zonyusa ukusebenza kweedrafti ezingezantsi kunye nekhabhathi zasekhitshini ngokunika ukufikelela ngokulula.
Izibambo ezihlanganisiweyo - Izibambo ezihlanganisiweyo zinokujongwa njengokhetho olusisiseko lwezixhobo zeekhabhathi zekhitshi zaseYurophu ngenxa yokubonakala kwazo. Kuxhomekeka kwimathiriyeli yayo, ukudityaniswa okuhlanganisiweyo kunokuba nokudibanisa okanye ukwahluka kuyilo lweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu.Izibambo ezihlanganisiweyo zakhiwe kwizixhobo zekhabhathi zekhitshi ezinephrofayili yomda engaphakathi. Olu hlobo lwekhompyuter yehardware yehardware isebenza ngokulula njengenxalenye ebunjiweyo okanye isithuba esikhutshiweyo sibamba iminwe ukuze sibambe ngokupheleleyo.
Izibambo ezihlanganisiweyo ziza kwizinto ezahlukeneyo ezinjengokhuni kunye nentsimbi kwaye umbala wayo unokuguqulwa ngokuxhomekeke kwinkangeleko ofuna ukuyifeza kwiikhabhathi zakho zasekhitshini. Njengoko sele kukhankanyiwe, ifuthe elipheleleyo leziphatho ezihlanganisiweyo zeekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zendlela ziya kuxhomekeka kakhulu kwizinto kunye nombala. Ukuba isibambo esidityanisiweyo sifana ncam nombala wekhabhathi zasekhitshini, isiphumo siyilo olungenamthungo ngakumbi, kodwa ukuba izinto azidibani, umahluko uyaveliswa. Umzekelo, izibambo ze-chrome ezidityanisiweyo ezidityaniswe ngekhabhathi emhlophe yaseYurophu ekhitshini ekhitshini ijongeka njengebhanti yentsingiselo yentsimbi eyenza umahluko omkhulu kwisithuba. Ngelixa izibambo zomthi ezidityanisiweyo zibhangqwe ngomthi ukugqiba isitayile saseYurophu iikhabhathi zekhitshi zivelisa ukubonakala okungagungqiyo kunye notshintsho olugudileyo phakathi kwekhabhinethi kunye nezixhobo.
Kukho iindidi ezininzi zeziphatho ezidityanisiweyo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ezizezi C zendlela kaloliwe yentsimbi etsala kunye neJ ijelo kaloliwe lentsimbi. Ezi zinto zihlala zibonelelwa njengezinto ezikhethiweyo ngabanikezeli bekhabhathi ekhitshini.
Ijelo le-C kunye no-C wesitishi sensimbi - Njengohlobo lwekhompyuter yehardware edityanisiweyo, ijelo le-J kunye no-C wesitishi somzila wesinyithi wakhiwe ngokupheleleyo ngaphakathi okanye watyholwa ngokupheleleyo kumnyango wekhitshi lasekhitshini okanye ubuso bedraw. Ikwayifakelwe ngendlela efanayo-ibekwe kwindawo ephezulu yeengcango zekhabhathi yeedrawer zekhabhathi zekhitshi, kwaye ibandakanyiwe emazantsi eminyango yekhabinethi yeekhabhathi zekhitshi ezingaphezulu. Umahluko phakathi kwezi zimbini yimilo okanye iprofayili abayithathayo-J okanye C yesitishi somzila wesinyithi obonakala ngophawu lwe-J kunye no-C ngokulandelelana. Uyilo lwezixhobo zekhabhathi lusilungele kakuhle isimbo sokubhalwa kweengcango zekhabhinethi yaseYurophu.
Iziphumo zizonke zokusebenzisa umzila kaloliwe we-J kunye no-C uyilo olucekeceke kakhulu noludibeneyo lwekhitshi. Intengiso kuba zihlala ziqhuba ubude obupheleleyo bomnyango wekhitshi lekhitshi okanye iyunithi yedrowa, ifom yomgca kunye nesishwankathelo seekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zigxininiswa ngakumbi. Isebenza kakuhle ekunikezeleni umahluko ngokubhekisele kubume bezinto kunye nezinto, okanye ekwakheni ukujonga okuhambelana ngokungenamthungo. Xa isetyenziswa ngokuhomba okuphezulu kwesimbo saseYurophu iikhabhathi zekhitshi, i-J kunye no-C wesitishi somzila wesinyithi wokutsala ujongeke njengamabhanti ezinto zentsimbi ezongeza umdla kuyilo olupheleleyo lwendawo.
Olunye uncedo oluphambili lolu hlobo lwekhabhathi yekhitshi yeyokuba banciphise umngcipheko wempahla ekubanjweni kwizibambo okanye ezinqeni zibhampa kwizinyithi njengoko zingancamathelanga ngaphandle kweengcango zekhabinethi kunye nobuso bedrowa. Kulula nokusebenza ngenxa yobude bayo kunye nobukhulu bayo. Nangona kunjalo, kukho enye into ebuyela umva ekusebenziseni olu hlobo lwezixhobo zekhabhathi. I-J kunye no-C wesitishi somzila wesinyithi, kubandakanya ezinye izinto ezihlanganisiweyo, banokuqokelela ngokulula ubumdaka nothuli ngaphakathi kwamajelo okanye phakathi komsantsa ophakathi.
Ezinye izitayile zekhabhathi zekhitshi yoyilo lwaseYurophu
Ngaphandle kokungabikho kwezibambo okanye ukusetyenziswa kweziyilo ezidityanisiweyo zehardware ezidibanisa ngaphandle komthungo kwaye zenze indawo ethe tyaba yesitayile sekhitshini yaseYurophu, kukho ezinye izinto zoyilo ezikwanomgangatho wekhabhathi etsala kunye neziphatho ezihlala zibekwe kumphezulu wekhabhinethi. Olona phawu lubabekayo bahluke kulo naluphi na olunye uhlobo lwezixhobo zekhabinethi yekhitshi yimigca yabo ethe tye kunye ne-aesthetics encinci.
Ibar iyatsala, isike ibar yokutsala kunye nebar ephathekayo itsala wonke umsebenzi njengezitetimenti zokwenza iziqwenga, kwaye endaweni yokudibanisa ngaphandle komthungo kuyilo lwekhabhathi yekhitshi, ezi ntlobo zintathu zekhompyuter zenzelwe ukuba zivele.
Ibha iyatsala - Ukutsalwa kwebha luhlobo oluqhelekileyo lwezixhobo zekhabinethi yekhitshi ezinembonakalo elula kunye nemilo. Ukutsalwa kwebha luhlobo lweehadi zeekhabhathi ezingqameneyo, ezihlala zixande ngokuma kunye neziphelo ezincamathelayo-okanye iziphelo zide kunenxalenye ejijekileyo ebusweni bekhabhathi yekhitshi. , kwaye ukusukela ngoko ubuhle babo beklasikhi baba yenye yezona zixhobo zaziwayo zekhompyuter kwindawo yoyilo ekhitshini. Ukujongwa okungapheliyo kweebar kutsalwa kungqinwe ukuma ngokuchasene novavanyo lwexesha kwaye kusaqhubeka nokuba yenye yezona zinto zinokuhonjiswa kwaye zinexesha elingenasiphelo zekhabinethi yezixhobo zekhompyuter.
Ukutsalwa kwebha sisiseko sokuyilwa kwekhabhinethi yaseYurophu ngenxa yokulula kunye nomfanekiso ohlaziyiweyo. Oku kuhlala kusetyenziselwa ukuxhasa uyilo lweengcango zepaneli ezithe tyaba kunye neengcango zesitayile seSlab. Xa ukhetha ibar yokutsala isitayile saseYurophu iikhabhathi zasekhitshini, qiniseka ukuhamba nezinto zoyilo ezenziwe ngentsimbi engenasici kwisiphelo se-chrome okanye isiphelo se-satin.
ukuba uthini xa umntu etshata
Ukutsalwa kwebha yeflethi
Inkunzi yenkomo ethe tyaba luhlobo lwesiphatho sekhabhinethi esineemiphetho zesikwere kunye neprofayile ye-angular ebonakalayo. Ukutsalwa kwe-Flat bar kufumaneka ngobude obahlukeneyo kwaye ubungakanani nganye ivelisa ifuthe elingafaniyo kwimbonakalo yekhabinethi yekhitshi. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi yehardware isebenza kakuhle kunye nesimbo saseYurophu iikhabhathi zasekhitshini kuba ziyanceda ukuqaqambisa uyilo lwayo oluhlengahlengisiweyo kwaye luzisa ukugqamisa okubukhali kwindawo. Ukutsalwa kwe-Flat bar kulungele ngokufanelekileyo iikhabhathi zepaneli ezithe tyaba kunye needraw ethe tyaba. Kwiikhabhathi zaseYurophu zekhitshi zasekhitshini, qiniseka ukuba uhamba kunye nokubamba ngomnwe omde okanye omnene.
Ukuba ufuna ukongeza i-accent efihlakeleyo okanye i-punch eyongezelelweyo yokuhombisa kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu, ngaphandle kokuba ungoyiki kakhulu, ukucinywa kwebar kukhetho olunye lwezinto ze-Hardware onokuzihlola. Ukutsalwa kwebar okusikiweyo kukwahluka kwebar yeplati. Ngokwendlela emile ngayo nangokubonakala kwayo, ukusikwa kwebar okusikiweyo kuneprofayili ye-angular kunye noyilo olungqiniweyo, kodwa endaweni yokuba ubenomphezulu ogudileyo, usikwe kancinci embindini. Ukunqunyulwa kusebenza njengendlela yokugxininisa okanye ukuhlobisa kwaye ngokuqhelekileyo kwifom yejometri, njengesikwere okanye ixande.
Sika ii-bar ukutsala zibhangqiwe ngeepaneli ezisicaba zekhitshi okanye iikhabhathi zesitayile sekhitshi iingcango zekhabinethi njengoko zibonakala zibonakala ngaphezulu kumhlaba ocacileyo. Zikwabonakala ngokugqwesileyo okuphezulu kwesiphelo seglasi iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu xa kuthelekiswa nekhabhathi enziwe ngomthi.
I-Hardware igqibezela iikhabhathi zekhitshi zangoku
Xa kuthelekiswa nezixhobo zekhabinethi zemveli zasekhitshini ezinzulu ngokunzulu, ezinemibala emnyama kunye neziphantsi zentsundu, imibala yekhabhathi etsala, izibambo kunye namaqhina kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zihlala ziyisilivere okanye zingwevu kwaye zihlala zigqityiwe. Isizathu kukuba le mibala ihambelana nobukhali kunye nobukroti bobuhle besitayile sekhitshi yaseYurophu kakuhle, ethi yona idale uyilo olugqwesileyo ngokubanzi. Uninzi lwezixhobo zekhabhinethi zekhitshi zekhitshi loludidi lwentsimbi olukhazimlisiweyo kodwa oogxa babo bematriki nabo basebenza kakuhle njengenye indlela.
Nasi eminye imizekelo yeekhitshi zekhitshi ezigqityiweyo ezisebenza kakuhle kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu:
Ukugqitywa kwesinyithi - Ukugqitywa okuphekiweyo kubonakaliswa ngumbala oqaqambileyo. Isinyithi esisetyenziselwa ukugqitywa kwezixhobo zekhabinethi zihlala zinobundlongondlongo bokukhupha umphezulu ogudileyo kunye nombala oqaqambileyo.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zekhredithi yesinyithi egqityiweyo esebenza ngcono kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu. Chrome olukhazimlisiweyo, umzekelo ubonakaliswa ngumbala oqaqambileyo wesilivere ohamba kakuhle nekhabhathi ekhitshini. Kubonakala kukhazimla kakhulu kunegalelo kwisibheno esiqaqambileyo, yiyo loo nto inokwenza ukuqaqamba okuphezulu kwesitayile saseYurophu iikhabhathi zekhitshi zibonakale ziqaqambile. Ikhabhathi yekhitshi ye-chrome ekhazimlisiweyo ilungiswe kakuhle kwiikhabhathi zekhitshi ezimnyama zaseYurophu njengoko zenza umahluko kwisithuba. Ukuphucula isibheno sayo ngcono kunye nokwenza imbonakalo eyomeleleyo kunye nokudibana, izixhobo ze-chrome ezihonjisiweyo zinokudityaniswa nezixhobo zekhitshi zentsimbi ezifanayo.
Omnye umzekelo ngu I-nickel ephosiweyo izixhobo zasekhitshini zasekhitshini. I-nickel epholileyo yaziwa ngokuba yi-chameleon yehardware yekhabethe yehardware ngenxa yokuguquguquka kwayo okumangalisayo kunye nokukwazi ukuhambelana nokudibanisa kakuhle kunye neendlela ezininzi zoyilo lwekhitshi kunye neephalethi zombala. I-nickel ephosiweyo ibonakaliswa kukukhanya okuqaqambileyo kunye nombala ongaphantsi okanye ongacacanga. Ukubonakala kwayo okungafaniyo kuyivumela ukuba ihambelane kunokuba ime ngaphandle kwaye ikhuphisane nobuhle bekhabhathi yekhitshi.
I-nickel ephothiweyo ikwabonelela ngendlela elungileyo yokucima umbala kunye nokuthambeka kweekhabhathi zekhitshi zekhitshi zaseYurophu, ngakumbi ezo zimnyama okanye zimnyama. Ngaphezulu kwexabiso layo elithandekayo lobugcisa, i-nickel epholileyo ikwanika negalelo elininzi elifanelekileyo. Eyaziwa ngokuba yenye yezona ntlobo zezinyithi ezizinzileyo, i-nickel epholileyo ayinayo imozulu okanye i-rust, inexesha elide lokuphila xa kuthelekiswa nezinye izinyithi kwaye ayifuni ukuchukumisa kakhulu.
(Jonga le khabhathi yomnyango wekhabhathi e-Wayfair)
Ukugqitywa kwebrashi ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba kukugqitywa kwe-matte ngenxa yepolishi yayo engacacanga kunye nombala othambileyo. Isinyithi sokugqitywa kwebrashi ekhitshini yentsimbi yekharityhulam zihlala ziphantsi kwenkqubo yokupholisha esebenzisa ibrashi yebrashi entle ehamba iphinda-phinde kwicala elinye. Nangona isinyithi siphulukana nomgangatho obonakalisayo, izixhobo ezigqityiweyo zokuthambisa zinomnwe othambileyo wobukhazikhazi kubo. Inkangeleko yemigca ecolekileyo kakhulu ebonisa icala lokuxubha into leyo ibiphantsi kwayo ikwenza ubume bayo bube bodwa.
Umzekelo odumileyo wekhabhathi yekhitshi yezixhobo zokugqibela koku I-nickel ebrashiweyo. I-nickel yebrashi ebrashiweyo ibonakaliswa nge-sheen ethambileyo kwaye xa ithelekiswa ne-nickel ecoliweyo, oku kugqibela kunenkangeleko efihlakeleyo. Nangona kunjalo, njenge-nickel e-polished, i-nickel e-brushed iyakwazi ukudibanisa ngokugqibeleleyo nalo naluphi na uhlobo lwekhabhathi yombala wekhitshi kunye nokugqiba, kunokuba ume ngaphandle. I-nickel e-Brushed isetyenziswa ngokufuthi kwiikhabhathi zekhitshi zaseYurophu ezinemibala emnyama njengoko inokuthi ithambise ukujonga kwayo konke.
Ukugqitywa kwe-satin kunye nokugqitywa kwebrashi kuyafana ngokufanayo, eneneni la magama mabini ahlala etshintshana ngokwekhitshi lekhabhathi yekhitshi. Nangona kunjalo, kukho umahluko omncinci kakhulu phakathi kwezi zimbini. Ukugqitywa kwesixhobo se-Satin kubonakaliswa ngumbala ogqamileyo nonqabileyo wobusi. Ngaphantsi kwenkqubo efanayo nebrashi yentsimbi edlula kuyo, i-satin igqiba izifundo zentsimbi ekuxukuxeni ngemivumbo emide, kodwa isandula emva koko. Inyathelo lokugqibela (isanti engapheliyo) yenza wonke umahluko kuba endaweni yokubonakala kwemigca emihle, nayiphi na ipateni ebonakalayo iyasuswa kwaye ukujonga okungaphaya kuyafezekiswa. Xa kuthelekiswa nokugqitywa okugqityiweyo, i-satin yokugqiba i-Hardware inokubukeka okuthambileyo, umbala ocekeceke ngakumbi kunye nomgangatho ophezulu we-matte.
Ngaphandle kwe-aesthetics yayo eyahlukileyo, ibhonasi eyongeziweyo ekusebenziseni i-satin yokugqiba ikhitshi yehardware yeyokuba kulula ukuyigcina. Xa kuthelekiswa noogxa bayo ababengezelelweyo ababonisa iminwe ngokulula, i-satin igqiba izixhobo zekhabhathi kuba azifumani lula amanqaku kumphezulu wayo.
Uhlobo oluthandwayo lokugqiba izixhobo ze-satin ezisebenza kakuhle kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu Isilivere yesatin. Isoftware yebala yekhitshi yesilivere ibonakaliswa yimatte, ibrashiwe njengomphezulu. Thelekisa nesilivere ephothiweyo, i-satin yesilivere ineenkangeleko zokuthambisa ngakumbi ezisebenza kakuhle kuzo zombini iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu ezikhanyayo nezimnyama. Xa ifaniswe nekhabhathi emhlophe ekhazimlayo emhlophe, izixhobo zesilivere zesatin.Olu hlobo lokugqitywa kwekhabhathi yekhitshi yekhitshi luqhele ukusetyenziswa njengesihombiso esifanelanayo kwizixhobo zentsimbi engenasici. Inika umbala ohambelana nokuthamba kwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini, ngelixa isebenza njengeyona ndlela ilungileyo yokususa iikhabhathi ezimdaka ngombala nezintsundu.
Olunye ugqibe - Insimbi engenasici kunye ne-nickel chrome zezinye iintlobo ezimbini zekhitshi lekhabhathi yentsimbi elingana neesesthetics zale mihla zekhabhathi zasekhitshini zaseYurophu.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Izixhobo zekhabhathi yekhitshi zaziwa ngokuqina kunye nokuqina okuphezulu njengezinto. Inkangeleko yesilumko, ikhabhathi yekhitshi yentsimbi engenasici inombala ocacileyo wesilivere. I-aesthetics yayo ebukhali, ubukhazikhazi obumenyezelayo kunye nokujonga okucocekileyo kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo kakhulu kwiikhabhathi zekhitshi zaseYurophu. Ikhabinethi yentsimbi yekhitshi engenasici inikezela ngokuchaseneyo ngokokuyilwa njengoko inokudityaniswa kunye nekhabhathi enemibala ekhanyayo kunye emnyama, nokuba ingathathi cala njengemhlophe, ngwevu, mnyama okanye imibala egqamile njengombala ocwebezelayo okanye umbala wekalika.
Omnye umzekelo ngu Umnxeba Chrome izixhobo zekhabhinethi zekhitshi ezibonakala ngenkangeleko ethulweyo enemibala yesilivere. Xa kuthelekiswa neqabane layo elikhazimlisiweyo, i-nickel chrome inombala omnyama kunye nomphezulu ongaphezulu. I-nickel chrome ekhitshini yehardware yehardware ibhangqwe kakuhle kunye nekhabhathi ekhanyayo yaseYurophu ekhitshini yasekhitshini. Endaweni yokudibanisa, i-nickel chrome ekhitshini yentsimbi yekhabhathi yenziwa yema ngaphandle. Xa idityaniswe nekhabhathi emhlophe ekhazimlayo emhlophe, i-nickel chrome Hardware yenza ingxelo eyomeleleyo kwisithuba.
Olunye uphawu olwahlukileyo lweekhabhathi zaseYurophu zekhitshi kukusetyenziswa kweehenjisi ezikhethekileyo ezinceda ukubonelela ngokulula kokusebenzisa kunye noyilo olungenamthungo ngakumbi. Ukufezekisa inkangeleko yangoku, engenamthungo, iihenjisi ezisetyenziswe kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zifihliwe kwimbonakalo ecacileyo kwaye ifakwe kwi-insides yekhabinethi. Ngenye indlela, iihenjisi ezisondeleyo ezithambileyo zikwasetyenziselwa ukufezekisa ukusebenza okuphezulu.
Kukho iintlobo ezininzi zeehenjisi ezisebenza kakuhle kwisitayile sekhitshi laseYurophu. Nalu ushwankathelo olufutshane lweempawu zabo kunye neempawu ezintle:
Iihenjisi ezifihliweyo - Ihenjisi efihliweyo ngokufana noyilo lwesitayile saseYurophu, enyanisweni, ihlala ikwabhekiswa kwiihenjisi zesitayile saseYurophu. Iihenjisi ezifihliweyo luhlobo lwekhitshi yehardware yentsimbi egxunyekwe emnyango wekhabhathi ngexesha lofakelo ukuze ifihle okanye ifihle indawo ekuyo. Iihenjisi ezifihliweyo zisebenza kakuhle kwiikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu kuba zenza umphezulu ogudileyo kunye notshintsho olungenamthungo kwinkangeleko yangaphandle yeekhabhathi zekhitshi. Xa iikhabhathi zekhitshi zivaliwe, iziphumo zizonke ludonga olupheleleyo lwekhabhathi yekhitshi engenanto ngaphandle kwendlela yokusebenza ebonakalayo.
Ngaphandle kokwenza i-aesthetics ebonakalayo emsulwa, iihenjisi ezifihliweyo zikwabonelela ngenani lezibonelelo ezisebenzayo kumsebenzisi wendawo. Ukuqala, iingcango zekhabinethi zihlengahlengiswa ngokupheleleyo emva kokuba iihenjisi zifakiwe. Naluphi na uhlengahlengiso oluncinci lunokuhlalwa ngokulula ngokuguqula nje izikrufu usebenzisa iscrewdriver esilula. Ukulungelelaniswa kweminyango ukususa izikhewu phakathi kweengcango okanye iindonga zekhabinethi kulula ukuzisebenzisa usebenzisa intshukumo elula kumacala amabini ukuya kwamathathu, yiyo loo nto iziphumo zilungelelaniswe kakuhle nekhabhathi yekhitshi. Iingcango zeKhabhinethi ezisebenzisa iihenjisi ezifihliweyo zinokususwa ngokulula nangaliphi na ixesha zisebenzisa indlela elula engenziwa ngokulula nangubani na. Ngeehenjisi ezifihliweyo, iihardware okanye iihenjisi ngokwazo akufuneki zisuswe kumnyango wekhabhinethi. Ihenjisi efihliweyo ikwabonelela ngokhuseleko ngakumbi kwaye inegalelo ekucoceni lula umphezulu wekhabhathi yekhitshi. Ukongeza, iindleko zekhitshi ezifihliweyo zeehenjisi zekhabhinethi azibizi kakhulu.
Nangona kunjalo iihenjisi ezifihliweyo zibonisa eyona ngxaki inkulu. Nangona kulula ukuzihlengahlengisa kunye nokumisela, ukufakelwa kokuqala kunokuba nzima kancinci. Njengoko sele kukhankanyiwe, umngxunya kufuneka ubhoreke ngaphakathi kumnyango wekhitshi lasekhitshini kwaye ngezixhobo ezifanelekileyo ezinje ngestorstst bit, isixhobo sombane, umatshini wokuprinta kunye nomatshini okruqulayo uyafuneka. Inokufakwa ngumninikhaya ophakathi kodwa kuphela ukuba uyaziqonda ngokupheleleyo iimfuno zofakelo kunye nolungiselelo.
Iihenjisi ezifihliweyo zeza neendlela ezahlukeneyo zokumiliselwa. Zintathu iintlobo ezisisiseko zeehenjisi ezifihliweyo ezizezi ngaphezulu, isiqingatha sigqume ngaphezulu kunye nokufaka. Uhlobo lwehenjisi ekufuneka lusetyenzisiwe kumnyango wekhabhinethi lumiselwe lixabiso lokugqunyelelwa kweengcango zekhabhinethi yasekhitshini. Isigqubuthelo sibhekisa ekubekeni ucango ngokunxulumene nokuvulwa kwekhabhinethi.
Ukuxhoma ngokupheleleyo iihenjisi ezifihliweyo
Ukugquma ngokupheleleyo Ihenjisi efihliweyo lolona hlobo luqhelekileyo lwehenjisi efihlakeleyo esetyenziswa kwisitayile saseYurophu kwikhabhathi yekhabhathi. Iyaziwa ngokuba noyilo olulula lwengalo kwaye ihlala isetyenziselwa iingcango zekhabinethi ekhitshini ezigqobhoza ngokupheleleyo ekuvulekeni. Ngokwesiqhelo, iihenjisi ezifihliweyo ezigcweleyo zisetyenziswa kwisiphelo ngasinye sokuqhutywa okupheleleyo kweekhabhathi zekhitshi ukuze zilungelelanise icala lasekhohlo nelasekunene nejamb. Ukuxhoma ngokupheleleyo iihenjisi ezifihliweyo zisebenza ngokusemgangathweni kwiikhabhathi zaseYurophu zasekhitshini ezigqityiweyo ngee laminates.
Iziqingatha iihenjisi ezifihliweyo - Iziqwengana ezifihliweyo ezinesiqingatha zihlala zisetyenziselwa iingcango zekhabinethi ezidibana kunye okanye ezo ziqhotyoshelwe kumacala ahlukeneyo ekwahlulelweni, ukwahlula phakathi kwekhabhinethi. Iziqwengana ezifihliweyo ezifihliweyo ezijolise kwizibini zeengcango zekhabinethi ekhitshini ezifumaneka kwinqanaba eliphakathi lekhabhathi.
Iihenjisi ezifihlakeleyo zangaphakathi
Iihenjisi ezifihliweyo zangaphakathi zihlala zisetyenziselwa ukungena kweengcango zekhabinethi kuyilo olungenasiseko- apho kuvulwa khona ikhabinethi kwaye ihlala kwimiphetho yangaphambili yekhabhinethi. Iihenjisi ezifihliweyo ezingaphakathi zisetyenziswa kakuhle kwiikhabhathi zekhitshi ezibandakanya iingcango zeglasi.
Ngokumalunga nofakelo, iihenjisi zesitayile saseYurophu zihlala zinamacandelo amabini: ihenjisi kunye nepleyiti yokunyuka. Inxalenye yehenjisi ibekwe emngxunyeni oqhele ukuba ziimilimitha ezingama-25 ukuya kuma-40 eemilimitha ngokobukhulu, obekwe emva kocango lwekhabhathi yekhitshi. Isitya esinyusiweyo, kwelinye icala, sifakwe kwibhokisi yekhabhathi okanye kwisidumbu, kuxhomekeke kuhlobo lokwakhiwa kwekhabhathi eliqeshiweyo. Kwiikhabhathi zekhitshi zaseYurophu ezinesitayile esisebenzisa ulwakhiwo olungenasiseko, ipleyiti ebekiweyo ibekwe ngaphakathi ngaphakathi kwikhabhathi yesidumbu okanye ibhokisi, ngakumbi iphaneli esecaleni ye.
Iindlela ezisondeleyo zokuvala kunye neendlela zokuzivala ngokwakho
Enye into eyahlukileyo ekhitshini yaseYurophu ekhitshini yasekhitshini zihambele phambili kwikhabhathi yentsimbi kunye nendlela esebenza ngokulula kunye nokusebenza ngokukuko. Ukuzivalela okanye iindlela zokuvala ezithambileyo ziihenjisi zomnyango wekhabhinethi okanye izilayidi zedrowa ezinika amandla okuvala ngokwakho kwiminyango yekhabhinethi. Xa kuthelekiswa neehenjisi eziqhelekileyo kunye nezilayidi zedrowa, iindlela zokuvala ezithambileyo zisebenza ngokuhamba kancinci, zisusa ingxolo kunye nentshukumo eyonakalisayo yomnyango ogoqozayo. Xa iingcango zekhabhathi zekhitshi okanye iidrowa zivalwe ngenkani, iihenjisi zokuvala ezithambileyo kunye ne-glide ziyazibamba, zicothisa isantya sazo, emva koko sizikhokele ngobunono sibuyele kwindawo yazo evaliweyo konke kusetyenziswa umthombo olawula indlela yekhabhinethi yasekhitshini ngaphakathi.
Inkqubo yokuzivala okanye yokuvala ethambileyo ikwasebenza ngendlela apho uxinzelelo olusuka ekusebenzeni komnyango luyancitshiswa, ke endaweni yokuvala ngokupheleleyo, idrowa, umzekelo, iyema kwi-intshi esondele kwisakhelo ngaphambi kokuba ivalwe kancinci.
Olona ncedo luphambili lokuzivala kunye neendlela zokuvala ezithambileyo kukuba zibonelela ngokulula kokusebenzisa kunye nokusebenza ngakumbi. Ukongeza, iindlela zokuvala ezithambileyo zilawula ingxolo evela kwiingcango ezivaliweyo kwaye ukusukela oko iyancipha kwaye ithambe ifuthe, iikhabhathi zekhitshi zikhuselwe kumonakalo onokwenzeka ekuhambeni kwexesha.
Bona Okuninzi iintlobo zeehenjisi zekhabinethi yekhitshi Apha.
Ezinye izinto ezikhethekileyo kuyilo lwekhabhathi zekhitshi yaseYurophu
Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu nazo zakha igama lazo njengohlobo oluphezulu lweemodyuli zasekhitshini zemodyuli. Ukukhuthaza ukwenziwa ngokwezifiso, iinkqubo zeKhabhinethi zasekhitshini zeemodyuli zaseYurophu zivumela abaninimzi ukuba bayile ngokukhululekileyo iikhabhathi zabo zekhitshi ngokusekwe kwiimfuno zabo kunye neemfuno ezithile kwisithuba.
Ukwenza ikhabethe yekhitshi ebhalwe igama elipheleleyo elinomthamo omkhulu wokugcina kunye nombutho omkhulu, iiyunithi zokugcina zibonisa izixhobo ezizodwa. Ezi zinto zinokubandakanya ukukhutshwa kweepleyiti zokukhupha, iiyunithi zeepryry ezilungelelanisiweyo, iibhasikiti zocingo, ezakhiwe kwimigqomo yenkunkuma, iinkqubo ezikhethekileyo zokugcina idrowa, kunye nezixhobo ezihlanganisiweyo.
Imephu, Mhlophe, Sika kweFlethi, 24x96 10 mil (Pap ... $ 38.00 umthengisi ogqibelele (101) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Cosmas 305-030SN Satin Umzimveliso Cabin… Iidola ezingama-29.95 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-3499 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
WOOD-BONKE Maple Wood Veneer Sheet, 'A'… $ 35.60 umthengisi ogqibelele (30) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iseti yeethayile eziCwebezelayo eziMhlophe ezi-12 ze-A… $ 13.99 ngexabiso umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-142 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
kwenzeka ntoni kwitheko lokuzibandakanya
umtshato online ugcine umhla
iilokhwe ezimnyama zemikhono emide
umzalwana omkhulu eyona ndoda intetho
ukutshata kwicawa yamaKatolika
Sisiphi isangqa somtshato